Izixhobo zamandla eChina izixhobo kunye nabathengisi | Xuanyi
Iimveliso zokunyibilikisa isinyithi ngumgubo wentsimbi (okanye umxube we powder yentsimbi kunye nomgubo ongesosinyithi) owenziwe ngezixhobo kunye neemveliso ngokwenza kunye nokunyibilikisa inkqubo.Lilisebe lezinyithi kunye nezinto zesayensi.
Iimveliso zesinyithi somgubo zisetyenziswa ngokubanzi, ukusuka koomatshini abaqhelekileyo bokuvelisa ukuya kwizixhobo ezichanekileyo; Ukusuka kwizixhobo zehardware ukuya koomatshini abakhulu.
Carbide umatshini yokubumba ngomatshini; Ukusuka kwishishini elektroniki ukuya kwimveliso yeemoto; Ukusuka kwishishini loluntu ukuya kwishishini lezomkhosi; Ukusuka kwitekhnoloji ngokubanzi ukuya kwitekhnoloji ephezulu, inkqubo yokunyibilikisa umgubo ibonakala.
Imbali yophuhliso lwe powder metallurgy
Inkqubo yokunyibilikisa isinyithi yavela ngaphezulu kwe-3000 BC.Indlela yokuqala yokwenza isinyithi yayisisiseko se-metallurgy.
Ukungancedi kwenkqubo ye-P / M: Izinto ezingalunganga ngokubanzi
1) kuhlala kukho ii-pores kwimveliso;
2) ukomelela kweemveliso zepowder metallurgy eziqhelekileyo kungaphantsi kokuxolelwa okuhambelanayo okanye ukuphoswa (malunga ne-20% ~ 30% esezantsi);
3) Ngenxa yokuba fluidity yomgubo kwinkqubo yokwakha incinci kakhulu kunesinyithi esingamanzi, ulwakhiwo kunye nokuma kwemveliso kunqunyelwe kwinqanaba elithile;
4) uxinzelelo olufunekayo lokwenza luphezulu, ke iimveliso zinqunyelwe kwisikhundla sokucinezela;
I-5) iindleko eziphezulu zokucinezela ukufa, ngokubanzi kusebenza kuphela kwibhetshi okanye kwimveliso yobunzima.
Umgubo wentsimbi: umgangatho wemveliso yokugqibela kunzima ukuwulawula ngokukhululekileyo; Umgubo wentsimbi uyabiza; Umgubo awuthobeli umthetho we-hydraulics, ukuze ukuma kobume bemveliso kube nomda othile.
Izixhobo zokuvelisa kunye neendlela
1) Umatshini wokucinezela: uhlala ufuna ukusebenzisa umatshini wokushicilela obizayo
2) Ukufa ngokucofa: iyimveliso enokusetyenziswa enexabiso eliphezulu
I-4) Umgubo kulula ukuwudibanisa, kwaye kuthatha ixesha elide ukudibanisa
5) Ubungakanani kunye nokumila kweemveliso kulinganiselwe.
Egqithileyo Ukuthwala ioyile
Okulandelayo: Izixhobo zokucheba ingca